Diyo post :: 'पहिलेको प्रेम सयपत्री, अहिलेको मेरिगोल्ड'
'पहिलेको प्रेम सयपत्री, अहिलेको मेरिगोल्ड' - Diyo post
‘पहिलेको प्रेम सयपत्री, अहिलेको मेरिगोल्ड’
फाल्गुन २, २०७२- शृंगारिक गजलमा प्रकट पँगेनी शिवको छुट्टै पहिचान छ। प्रेमबारे लेखिएका उनका गीत, गजल, कविता र मुक्तक खुबै रुचाइन्छन्। ‘प्रणयवेदका ऋचाहरू’ (गजल संग्रह) ‘जूनको चिठी जुना’ लाई (गीत संग्रह), ‘यो मन कतै अल्झेको छ’ (कविता संग्रह) प्रकाशित छन्। उनीसँग नरेन्द्र राैलेले गरेको भ्यालेन्टाइन वार्ता:
प्रेमको परिभाषा हुँदैन। यो अपरिभाषित कुरा हो। प्रेम अनुभूति र भावनाको कुरा हो। हरेकको नजरमा प्रेम बेग्लाबेग्लै हुन्छ। जसरी जिन्दगी परिभाषित हँदैन। त्यसरी नै प्रेम पनि परिभाषित गर्न सकिँदैन।
प्रेम र यौनलाई कसरी परिभाषित गर्नुहुन्छ ?
प्रेमसँगसँगै यौन हुन्छ। मात्रा घटबढको कुरा मात्र हो। तर दुवै कुरा जोडिएर आउँछन्। प्रेमी र प्रेमिकाबीचको प्रेममा यो कुरा लागू हुन्छ।
हाम्रो पालामा अहिलेको जस्तो मोबाइल, फेसबुक, ट्विटर थिएनन्। प्रेम पत्र लेख्थ्यौं। दिनमै चारवटा प्रेमपत्र पनि लेखियो। ती अक्षरमा भावनाको रंग गाढा हुन्थ्यो। पहिला र अहिलेको समय, प्रविधि फरक छ। प्रेम व्यक्त गर्ने तरिका पनि फरक छ। इन्टरनेट मार्फत व्यक्त गरिने शब्दमा संवेदना कमै हुन्छ। पहिलाको प्रेम सयपत्रीजस्तै हो। जसमा सुगन्ध हुन्थ्यो। तिहारमा माला लगाउन पाइन्थ्यो। अहिलेको प्रेम मेरी गोल्डजस्तै हो, जसमा सुगन्ध भेटिंदैन। माला लगाउन पनि पाइँदैन।
के मानिस प्रेममा परेर बिग्रन्छ?
प्रेम गरेर मानिस बिग्रदैन। स्पर्श नगरी पनि कसैलाई प्रेम गरिन्छ। तर यौनले भने मानिसलाई बिगार्न सक्छ।
अहिले पनि तपाईंलाई प्रेमको प्रस्ताव आउँछन्?
प्रेमकै प्रस्ताव त राख्दैनन्।
प्रकाशित: फाल्गुन २, २०७२